Atụmatụ N'ihi ịnya With Kids On A Train | Save A Train
Home > Travel Europe > Atụmatụ N'ihi ịnya With Kids On A Train
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 29/12/2019)
Maka ezinụlọ ndị nwere ụmụaka, Nọkwa na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè pụrụ inwe ma na-akpali akpali na oké ọnụ ụzọ njem. Ọ bụ na-ikekwe kasị ọma na ọ dịghị ihe ọzọ na-akpata nchekasị mgbe ị na-ejegharị ejegharị na ụmụ. Anyị mara ejegharị ejegharị na ụmụaka na-akụda n'agbanyeghị ihe njem usoro, ma ọ bụrụ na ị na-anọkwasị n'elu ịnyịnya na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè. Ebe a bụ ụfọdụ Atụmatụ!
Ezinụlọ ga-achọ na-esi na ebe n'oge na-bulie tiketi na-enweta ezigbo oche ọnụ na ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na ị debeere oche, oche dị na a mbụ-abịa, mbụ ozi ndabere, n'ihi ya, anaghị na-araparawo a ọnọdụ ebe ị ga-iche.
Chee echiche banyere ụra mgbe ị na-agba na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè.
Nọkwa na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè eme njem na-ekwekọ n'àgwà nwa gị ụra oge, n'ihi ya, jide n'aka na ị na-akwadebe. Weta nkasi obi ihe dị ka a ohiri isi ma ọ bụ na a mmasị blankie.
The akụkụ kasị mkpa nke gị atụmatụ maka a ụgbọ okporo ígwè njem (karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ogologo) kwesịrị otú ị na-aga na-na na ọbịa.
Ihe doro anya oke maka ọtụtụ ndị nne na nna ga-ịzụta a ole na ole ji egwuri egwu ma ọ bụ na-eme ka ha ọkacha mmasị site n'ụlọ. Paint ụmụ agbọghọ 'mbọ, agụ akwụkwọ, egwu Uno, wetara na agba na akwụkwọ, na-ege ntị audiobooks.
ọzọ nnukwu n'ọnụ maka ịnya na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè bụ ibudata movies na ngwaọrụ gị mgbe ị na-na na n'ụlọ na-enwe ohere WiFi.
Enwere dịghị ala oche chọrọ ma ọ bụ eriri oche belt ịrịba ama, ka ụmụaka na-free ime banyere ụgbọ okporo ígwè dị ka ị na-ahụ ihe kwesịrị ekwesị! Ịgagharị ụgbọ oloko na ụmụaka bụ a oké ụzọ-adọrọ uche ha.
E nweghị ihe ọ njọ karịa ịbụ na njem na a na-egbochi n'ụzọ ọ bụla site uwe gị. Dress maka nkasi obi! Anyị nwere ike ikwu na breathable, stretchy uwe na ala akpụkpọ ụkwụ iji na-enwe gị ahụmahụ na ụgbọ okporo ígwè. Ahụmahụ agba nwere ike ikwu na-eweta a ole na ole obere ntụsara n'ụlọ kwa, dị ka a blanket ma ọ bụ otutu na a ohiri isi.
All na fọduru ime bụ na-anọdụ azụ, zuru ike na-enwe ịnya na ụmụaka na a ụgbọ okporo ígwè na ahụmahụ. N'ihi na na-na e nwere ọkara fun!
Ka anyị mara site tweeting anyị na @SaveATrain! , Ị nwere ike ịchọta anyị na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na ọwa na ala nke Saveatrain
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/riding-with-kids-on-a-train/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
europeantravel ụmụaka longtrainjourneys trainmovies ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Travel Travelingtips Travelingwithkids Travelingwithkidstips traveltips